ARCHIVE, NEWSPAPER » भाईप्रति प्रचण्डको यस्तो अविश्वास !
काठमाडौं । राजनीति र सत्तामा भाईहरूको विश्वास गरेका कारणले जङ्गबहादुर राणाले छोरासम्म गुमाउनु परेको थियो । विरासतमा छोरालाई उभ्याउन लागेको अभियोग लगाउँदै जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङ्ग लगायत उनका सन्तानलाई शम्शेर खलकले हत्या गरेको इतिहाँसहरूमा छन् । सत्ता र शक्तिका लागि भाईले दाजुको हत्या गरेको इतिहाँस नेपाली राजनीतिमा कसरी बिम्बित हुन्छ त ? तर, त्यहि जङ्गबहादुरको खाँचो देखेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि छोराछोरीको राजनीतिक भविष्य गुम्ने देखेपछि आफ्ना सहोदर भाई नारायण दाहालमाथि अविश्वास गरेका छन् ।
नारायण दाहाल चितवनका इञ्चार्ज हुन् । तर, अब भाइप्रति उनको विश्वास गुमिसकेको उनको घोषणाले प्रतित गरिसकेको छ । ‘म चितवनबाट चुनाव लड्छु’, उनले घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रचण्डले चितवनमा आफ्नो राजनीतिक विरासतको उदय गराउने प्रयत्न भने केही महिनाअघिमात्र गरेका होइनन् । यो एक वर्षअघिदेखिको योजनानुसारको घोषणा हो । काठमाडौं, सिरहा या रोल्पामा हार्ने त्रास भन्दा पनि राजनीतिक विरासत निर्माणका लागि उनी चितवनबाट लड्दैछन् । आफु शक्ति केन्द्र र कार्यकारी पदमा रहँदा चितवनसँग उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बलियो नहुनुको कारणका विकल्पमा पनि उनी चितवन छिरेका हुन् । ‘अब जन्मथलोबाटै चुनाव लड्छु । एक ठाउँमा लड्ने भएकाले चितवन फर्किएको हुँ ।’, उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
त्यसो त राजनीतिक विरासत लामो बनाउनका लागि पनि प्रचण्डले आफूलाई चितवमा उभ्याएका हुन् । राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा नारायण दाहाललाई हटाउँदै रेणु दाहाललाई चितवन छिराएका प्रचण्डले अबको विरासतको राजनीति त्यहिँबाट थाल्दैछन् । प्रदेश र संसदको चुनाव मंसिर १० र २१ मा गर्ने निर्णय भइसकेको छ र चितवनमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ । त्यसमध्ये एउटामा प्रचण्ड लड्नेछन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।